ဖုန်းများ - Gadget သတင်းများ | Gadget သတင်းများ (စာမျက်နှာ ၅)
EMUI ၁၀.၁ ဂလိုဘယ် Beta - နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံသော Terminal များ
Huawei သည်၎င်း၏ Android စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအလွှာအတွက် beta ကိုစတင်တော့မည်။ ဤတွင်မည်သည့် terminal နှင့်လိုက်ဖက်ပြီးမည်ကဲ့သို့လက်ခံရမည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။
iPhone SE 2020 အသစ်သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်
Coronavirus ကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းကြောင့်စောင့်ဆိုင်းနေရတာဖြစ်ပေမယ့် iPhone မှာစျေးပေါနေပြီ။
အာရှကုမ္ပဏီ Honor ကတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလောကတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိရန်အတွက်ကတိကဝတ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဂုဏ်ပြု…
OnePlus 8 နှင့် 8 Pro သစ်သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအကွာအဝေးအတွက်ဤ OnePlus အသစ်၏အလောင်းအစား၏သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရနိုင်မှုနှင့်စျေးနှုန်းအားလုံးကိုသင့်အားပြောပြပါမည်
Skype တွေ့ဆုံယခုအလုပ်လုပ်ပုံ - ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Zoom အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ
အစောပိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု application များတိုးများလာခဲ့ပြီးအများဆုံးဖြစ်လာသည်။
၎င်းသည် Xiaomi Mi 10 Pro နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်အားလုံးဖြစ်သည်
Xiaomi မှ ၂၀၂၀ ပထမနှစ်စာသင်ချိန်အသစ်အတွက်တရားဝင်တင်ဆက်မှုသည်အမှတ်တံဆိပ်၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
Huawei P40 နှင့် Samsung Galaxy S20 နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ဤဆောင်းပါးတွင် Samsung ၏ S20 အကွာအဝေးနှင့် Huawei's P40 အကွာအဝေးရှိ terminal အားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည်
Notebloc လျှောက်လွှာအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင်အတန်းများဆိုင်းငံ့ထားသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆရာထံသို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အလွယ်တကူပို့နိုင်သည်။
Xiaomi Redmi Note 9s သည်တရားဝင်နှင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
Redmi Note 9s မှပေးထားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်သိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်ရှိဂိမ်းကစားခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်အောင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှင်းပြပါမည်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း: Samsung Galaxy S20 VS Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro နှင့် Samsung Galaxy S20 အသစ်တို့အကြားမည်သည့်အရာသည် ၀ ယ်ယူသင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဒုတိယမျိုးဆက် Huawei ၏ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးယနေ့တွင် Gadget တွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Realme X50 Pro 5G အသစ်သည်စျေးကွက်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးသော terminal တစ်ခုဖြစ်သော high-end တယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရန် Realme ၏ကတိကဝတ်ဖြစ်သည်။
Sony သည် Xperia 1 II နှင့် Xperia 10 II ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည့်အကွာအဝေးနှစ်ခုကိုပါ ၀ င်သောတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလောက၌ကတိကဝတ်အသစ်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ၂၀၂၀ အတွက် S အကွာအဝေးသစ်ကိုပြသခဲ့ပြီး Galaxy အဖြစ်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
New Xiaomi Mi 10: စျေးနှုန်း မှလွဲ၍ အားလုံးနီးပါးတွင်ထူးချွန်သည်
Xiaomi Mi 10 အမျိုးအစားအသစ်သည်တရားဝင်ရှိပြီးသား ဖြစ်၍ စျေးနှုန်းတက်ခြင်းအတွက်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်
ဘယ် Galaxy S20 ကိုဝယ်မလဲ။ ကျနော်တို့သုံးမော်ဒယ်များနှိုင်းယှဉ်
ဖေဖော်ဝါရီလတွင်နှစ်စဉ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့်တိုင် Samsung ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏လောင်းကြေးအသစ်ကိုတရားဝင်တင်ခဲ့သည်။
Galaxy S20 သည် Samsung ၏ high-end အတွက်လောင်းကြေးအသစ်ဖြစ်သည်
Galaxy S20 အသစ်အကြောင်းသိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုဒီဆောင်းပါးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Samsung ၏ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်လောင်းကြေးသစ်ကို Galaxy Z Flip ဟုခေါ်သည်။
Android သို့မဟုတ် iOS စမတ်ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးသည့်ဓာတ်ပုံများ၏တည်နေရာကိုဤဆောင်းပါး၌အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
နှိုင်းယှဉ်ချက်: Huawei P30 Pro VS Realme X2 Pro
Huawei P30 Pro နှင့် Realme X2 Pro တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သောဗီဒီယိုနှင့်နောက်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည်။
တရားဝင်အာမခံချက်ရှိရန်နှင့်တရားဝင်ဥရောပတစ်ခုအတွက် ROM ကိုပြောင်းလဲရန်သင်၏ terminal ကို one plus website တွင်မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
Apple က Touch ID ကိုမျက်နှာပြင်တွင်ပေါင်းစည်းရန်ယမန်နေ့ကမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးနောက်အိုင်ဖုန်းတွင် Face ID နှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Emule သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုမဆိုခံစားရန်အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည့်အခါစီးရီးဖြစ်စေ
Play Store နှင့် App Store ရှိလျှောက်လွှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဂိမ်းအတွက်ငွေပြန်အမ်းငွေကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုမလဲ
၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းကာလများတွင်ပင်လယ်ဓားပြများသည်အစဉ်အလာအရမဟုတ်ဘဲ ...
သင်ဟာ Android မှာအမှိုက်ပုံးထဲကိုအမြဲတမ်းပျော်မွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ application ကိုအသုံးပြုပြီး application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှစပိန်နိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ 10N ​​2019 ၏ရလဒ်များကိုသိရှိထားပါ
သင်၏ WhatsApp ကိုပိုမိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုခိုးယူခြင်းမှကာကွယ်ရန်
၎င်းသည် Huawei Mate X ၏ပထမဆုံး "unboxing" ဖြစ်သည်
ရိုးရှင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုက Huawei Mate X အသစ်ရဲ့ပထမဆုံးအစစ်အမှန် unboxing ဆိုတာဘာကိုပြသလဲ
အာရှကုမ္ပဏီ Huawei မှစွမ်းဆောင်ရည်အလယ်အလတ်တန်းစားပြိုင်ဆိုင်မှုအသစ်ကို Note 5T ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငွေအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
Yuka, ကျွန်တော်တို့ကိုအစားအစာနှင့်အလှကုန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုသည့်မိုဘိုင်း application
Yuka application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုလျင်မြန်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ၀ ယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်
App Store မရှိဘဲအပလီကေးရှင်းကို iPhone ပေါ်တွင် install လုပ်နည်း AltStore
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအခြားနည်းလမ်းကိုသင်သိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Huawei Mate 30 သည်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းမပါဘဲ - သင်သိထားရန်လိုအပ်သည်
Huawei Mate 30 သည် Google application များမပါဘဲစျေးကွက်သို့မည်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်ဤကိစ္စတွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 30 နှင့် Mate 30 Pro: high-end သက်တမ်းတိုးသည်
Huawei Mate 30 နှင့် Mate 30 Pro တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား Munich တွင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်သည်။
iOS 13 သို့မဟုတ် iPadOS ကိုသင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
iOS 13 ကိုပြသနာမရှိဘဲ update လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါအဆင့်များကိုသင်ပြသပါမည်။ ယခုရရှိနိုင်သော iOS ဗားရှင်း။
Huawei P30 Pro ကိုအရောင်နှစ်မျိုးနှင့် Android 10 ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်
ဘာလင်ရှိ IFA 30 တွင်တရားဝင်ပြသခဲ့ပြီးမကြာမီစျေးကွက်သို့ကျရောက်တော့မည့် Huawei P2019 Pro အရောင်နှစ်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
IFA 8 မှာတရားဝင်ပြသခဲ့တဲ့ LG G2019X ThinQ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပါ။
IFA 40 မှာတရား ၀ င်တင်ဆက်ထားတဲ့ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှ LG K50s နှင့် K2019s တွေဖြစ်တဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy Fold ၏တရားဝင်နေ့ရက်ကိုကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တရားဝင်အမှတ်အသားပြုထားသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အတွင်းရှိ Honor 20s နှင့် Honor Play 3၊ ဖုန်းအသစ်များအကြောင်းရှာဖွေပါ။
Android Q ကို Android 10 ဟုခေါ်တွင်ပြီးအချိုပွဲများကိုနှုတ်ဆက်သည်။ သင်အသုံးပြုသောသကြားလုံးအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
ဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည့် Android ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းများကို Android မှယခုအထိအသုံးပြုခဲ့သည့်အချိုပွဲများ၏အမည်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
Xiaomi သည်စပိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိ Mi 9T Pro ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်
Xiaomi မှာသူတို့ဟာသူတို့ထုတ်ကုန်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချီမယ့်အချိန်အထိအချိန်အကြာကြီးမစောင့်ချင်ကြဘူး။ Xiaomi Mi 9T Pro ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည်
EMUI 10 ကိုတရားဝင်တင်ထားသည် - သတင်းအားလုံး
တရားဝင်တင်ပြပြီးဖြစ်သော Huawei ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏မူကွဲအသစ် EMUI 10 ၏သတင်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
သင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုဖြုန်းစေသော Android မှာ bug ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
အချို့သော Android သုံးစွဲသူများကိုမိုဘိုင်းဖုန်း၏ဘက်ထရီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဤပြfailureနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
နယူးယောက်တွင်ပြုလုပ်မည့်ပွဲတစ်ခုတွင်တရားဝင်ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သော Galaxy Note 10 နှင့် Note 10+ တို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi ၏တရုတ်စမတ်ဖုန်းသစ်စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Black Shark2Pro အကြောင်းမကြာမီကစပိန်သို့မကြာမီလာရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။
မြန်နှုန်းကင်မရာများကိုရှောင်ရှားရန် applications များ
Galaxy Fold ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချိမည်
Galaxy Fold မှ Samsung မိတ်ဆက်ခဲ့သောအပြောင်းအလဲများအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။ စက်တင်ဘာလတွင်သူတို့ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းထုတ်လွှတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ4နားကြပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
စွမ်းအင်စနစ်မှ Urban 4၊ လှပသောဒီဇိုင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးအသံအရည်အသွေး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှုနှင့်အလွန်ပေါ့ပါးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
iOS 13 beta ကို iPhone နှင့် iPad တွင် Windows နှင့် Mac မှမည်သို့ install ရမည်နည်း
အကယ်၍ iOS 13 ကိုပထမဆုံး beta ကို install လုပ်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါကဤဆောင်းပါးတွင် Windows နှင့် Mac မှမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
Realme3Pro ကိုဇွန်လမှဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရနိုင်သည်
ဇွန်လ ၅ ရက်တွင် Realme5Pro သည်စပိန်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များရှိသည့် terminal ကိုစျေးနှုန်းထက်ပိုမိုများပြားသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏ Huawei အားလူမဲစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပထမဆုံးဂယက်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး Google ၏ Android ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ
Huawei P30၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်နှင့်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပထမဆုံးတွေ့မြင်ရမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
တရားဝင်တင်ထားပြီးဖြစ်သော Huawei P30, P30 Pro နှင့် P30 Lite တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Huawei ၏ high-end range အသစ်အကြောင်းအားလုံးရှာဖွေပါ။
Android မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းအားလုံးရှာဖွေပါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ အက်ပ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းမှဖုန်းပေါ်ရှိလုံခြုံမှုစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Huawei ၏ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်တံခါးသည်တံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ Huawei Y20197ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးအချိုးအစားဖြင့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
Android မှာဖွင့်ထားတဲ့ application တွေကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲ
Android တွင် application များကိုပိတ်ခြင်းသည်စမတ်ဖုန်းကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Sony Xperia 1: Sony ၏ high-end အသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
ဘာစီလိုနာရှိ MWC 1 တွင်တရားဝင်ပြသခဲ့သည့် Sony ၏ Xperia 2019 အဆင့်မြင့် Sony ၏ Xperia XNUMX အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စျေးကွက်တွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်စမတ်ဖုန်းအသစ်နှစ်လုံးဖြစ်သော Samsung Galaxy Fold နှင့် Huawei Mate X တို့ကိုအလွန်ဆင်တူသည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကွဲပြားခြားနားသည်။
Xiaomi သည်ဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင် 5G နည်းပညာနှင့်ပထမဆုံးထုတ်ကုန်ကို Xiaomi Mi Mix35G အသစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။
ဆမ်ဆောင်း၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပရန်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်စက်ပစ္စည်းအရေအတွက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S10e: စျေးနှုန်း၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရရှိနိုင်မှု
ယခု Galaxy S range ကိုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအချိန်နှင့်အခြားနှစ်များနှင့်မတူဘဲကိုရီးယားကုမ္ပဏီ ...
Samsung Galaxy S10: စျေးနှုန်း၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရရှိနိုင်မှု
Galaxy S10 သည် Galaxy S9 ၏သဘာဝဆက်ခံသူဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ယခင်ထုတ်ဝေချက်များနှင့်မတူဘဲ၊ အဓိကခြားနားချက် ...
Galaxy S10 နှင့် iPhone XS နှိုင်းယှဉ်မှု
အကယ်၍ သင်သည် Galaxy S10 သို့မဟုတ် iPhone XS ကို ၀ ယ်ရန်သံသယဖြစ်နေလျှင်ဤဆောင်းပါးတွင်သင်၏သံသယများကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
ရက်သတ္တပတ်များစွာကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်၎င်းထုတ်ကုန်သစ်အားတရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi9SE နှင့် Xiaomi Mi9Transparent Edition - သတ်မှတ်ချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
Xiaomi Mi9အမျိုးအစားသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ယခုဆောင်းပါးတွင်အာရှထုတ်လုပ်သူ Xiaomi မှသင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုပြသပါမည်
Galaxy S10 အကွာအဝေးကိုတရားဝင်တင်သွင်းခြင်းမပြုမီနှစ်ရက်အလိုတွင်၊ ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုပေါက်ကြားခဲ့ပြီး terminal များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်မြင်နိုင်သည်။
LG V40 ThinQ ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင်ရရှိနိုင်သည်
LG ၏ high-end terminal V40 ThinQ ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချမည် ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုပြောပြနေစဉ်။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် WhatsApp အသုံးပြုနည်း
Android သို့မဟုတ် iPhone ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းမှအမှားများနှင့်ဖျက်မိသည့်ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရယူနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
iOS 12: အသစ်၊ လိုက်ဖက်တဲ့ကိရိယာများ၊ ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ
iPhone အတွက် Apple ၏ operating system ဗားရှင်းကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဤဆောင်းပါး၌ iOS 12 အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုပြသပါမည်
Actualidad Gadget ရှိ iPhone အသစ်၏တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုကိုလိုက်နာပါ
မနက်ဖြန်ဒီနှစ်အတွက် iPhone မျိုးဆက်သစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောလဟာလအများစုအရမော်ဒယ် ၃ မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်မယ်လို့မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏အကောင့်ကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့် Fortnite တွင်အခမဲ့အကကိုရယူပါ
မကြာသေးမီလများအတွင်းပလက်ဖောင်းအားလုံးပေါ်ရှိကြယ်ပွင့်ဂိမ်းသည် Fortnite ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အောင်မြင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ရန်အတွက်အခြေခံသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုကာကွယ်ရန် authentication ကို
လူတိုင်းအတွက်နည်းပညာ - Wiko စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားအသစ်ပါ
၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းများအတွက် Tesla ကြိုးမဲ့ charger အသစ်ဖြစ်သည်
Tesla ကုမ္ပဏီသည် Elon Musk သည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
Xiaomi သည် Pocophone F1 အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်အတူစျေးနှုန်းများကြောင့်စျေးကွက်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်
ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Xiaomi အမှတ်တံဆိပ် Pocophone F1 ဟုခေါ်သည့်မော်ဒယ်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
Google Pixel နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်ထဲကိုအပြည့်အဝ ၀ င်ရောက်လာတာကြောင့် Google က Pixel XL ရဲ့တတိယမျိုးဆက်ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အသုံးပြုသူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်နိုင်ငံအရေအတွက်တိုးပွားလာပါတယ်။ သင် terminal ကို၏ပထမပုံရိပ်များ, ၎င်း၏တင်ဆက်မှုမတိုင်မီ2လ။
Xiaomi မှ Pocophone F1 သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
ဒီမှာ Xiaomi စမတ်ဖုန်းအသစ်ကအဆင့်မြင့်မော်ဒယ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အသစ်…
အကယ်၍ အီးမေးလ်မဖတ်ခင်၎င်းသည်မှန်ကန်စွာရေးထားကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်၎င်းသည်ရှည်လျားသောနှောင့်နှေးမှုရှိသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုပြသပြီး၊ Android အတွက်ဂျီမေးလ်အတွက်ဂျီမေးလ်သည်နောက်ဆုံးမှကျွန်ုပ်တို့အားဖျက်သိမ်းရန်သင့်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအမှန်ပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အီးမေးလ်ပို့ပြီးပြီ
Xiaomi Redmi6နှင့် Redmi 6A တို့သည်စပိန်သို့ယူရို ၁၁၉ မှရောက်ရှိသည်
Samsung Galaxy Note9၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူကိရိယာအသစ်တစ်ခုစတင်သောအခါသုံးစွဲသူများစွာရှိသည်မှာသေချာသည်။
နာရီအနည်းငယ်ကြာသည့်တိုင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung ၏အထင်ကရအသစ်သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Galaxy Note9...
Samsung Galaxy Note9ကိုတရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်
လများစွာကောလဟာလများအပြီးတွင်ယနေ့သြဂုတ်လ ၉ ရက်တွင်ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီသည် Note range ၏ terminal အသစ်ကိုတရားဝင်တင်ပြခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်တင်ဆက်မှုကိုလွဲချော်ခဲ့ပါကအောက်ပါအချက်အလက်များသည် Samsung Galaxy Note9၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Samsung Galaxy Note9ကိုနယူးယောက်၌တရားဝင်ပြသ
Samsung ၏လဆန်းပုံစံနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများနှင့်ပေါက်ကြားမှုများအပြီးသီတင်းပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ...
ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ WhatsApp ကိုအကောင့်ကိုဘယ်လိုဆယ်တင်နည်း
WhatsApp messaging platform သည်သန်းပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူများအတွက်အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောအားနည်းချက်များရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်မည်သို့ပိတ်ဆို့ခံထားရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပါကမည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်ရှိပါစေဤဆောင်းပါး၌၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်ပုံကိုဖော်ပြပါမည်။
ယခုလတွင် Xiaomi Mi 8 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင် ၀ ယ်နိုင်သည်
လွန်ခဲ့သည့်တစ်ပတ်ခန့်ကပင် Android တွင်မရရှိနိုင်သည့်ဖက်ရှင်ဂိမ်း Fornite ကိုသတင်းတစ်ပုဒ်အနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအရ Samsung ၏ Fortnite ၏သီးသန့်သည်ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အထိရက်ပေါင်း ၁၂၀ အထိတိုးချဲ့နိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Note 120 ရက် ၃၀ သက်တမ်းသည် Samsung ၏ S range သို့သက်ရောက်နိုင်သည်။
ဒီ Samsung မော်ဒယ်လ်ကိုတရားဝင်မတင်ခင်တစ်ပတ်တောင်မပြည့်သေးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ...
Microsoft ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ဖရင့်တွင်၊ ဤအုပ်စုအတွက်အဓိကသတင်းများအပြင်၊
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Mountain View အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် Pixel မော်ဒယ်များကိုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည့်အခါ၎င်းသည်အသစ်အဆန်းကိုပြောင်လှောင်ခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်အရ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမှတ်အသားအရေအတွက်နှင့်တည်နေရာကိုအတည်ပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များ။
အာရှကုမ္ပဏီ Huawei သည်ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက်ဘဏ္resultsာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အမြောက်အမြား၏အဆိုအရ Fortnite သည်သြဂုတ်လ ၉ ရက်တွင်လာမည့်သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် Galaxy Note9သို့သီးသန့်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်လကြာလိမ့်မည်ဟုသီးသန့်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့် Xiaomi Mi A2 နှင့် Mi A2 Lite တို့၏စျေးနှုန်းများဖြစ်သည်
Xiaomi Mi A2 အသစ်ကိုတရားဝင်ကြေငြာပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ၂၄ နှစ်ကျော်အချိန်၌တရားဝင်ရုံးခွဲဖြစ်လာသည်။
Xiaomi Mi A2 ကို ၂၄ နာရီမတိုင်မီရောင်းချနိူင်သည်
ယနေ့တွင် Xiaomi Mi A1 ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သော Mi A2 သည်အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့် terminal ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကပြသခဲ့သောအောင်မြင်မှုကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်တင်ပြခြင်းမပြုမီ ၂၄ နာရီအလိုတွင် Xiaomi Mi A24 နှင့်၎င်း၏ Lite ဗားရှင်းကိုတရားဝင်ပြသခဲ့သည်။ Gearbest မှတဆင့်ဝယ်ယူသည်
WhatsApp မှတစ်ဆင့်သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၊ လှည့်ဖြားသောကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရရှိခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ နေ့လည်ခင်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမက်ဆေ့ခ်ျပို့သည့်ပလက်ဖောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ရန်အကြိမ်အရေအတွက်အပြောင်းအလဲကိုကြေငြာလိုက်သည်
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာAugustဂုတ် ၉ ရက်နေ့တွင်ဖော်ပြသောဆမ်ဆောင်း Galaxy Note9နှင့်ပတ်သက်သည့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပြသပါမည်
Nokia သည်၎င်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီး Nokia 3.1 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်နေသည့်ကုမ္ပဏီသည်တစ်ပတ်လျှင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုလက်တွေ့ကျကျစတင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ...
Samsung Galaxy S10 က fingerprint sensor ကို screen အောက်မှာထည့်လို့ရပြီ
ယခုတွင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ပုံစံအသစ်များသည်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကို ... အောက်တွင်ထည့်သွင်းပုံရသည်။
Nokia 8110 Reloaded ကို ၇၉ ယူရိုရှိတဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပါပြီ
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Nokia အနေဖြင့် "ဟောင်း" ကိရိယာများကိုစတင်ခြင်းနှင့်မအံ့သြတော့ပါ။
ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် OnePlus 10 အနီရောင်ရောက်လာလိမ့်မည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ OnePlus ၏စမတ်ဖုန်းကအနီရောင်ကိုထပ်ဖြည့်ပေးပြီးစုံတွဲတစ်တွဲကိုတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်သည်။
Huawei Y5: 2018၊ Huawei ၏အသစ်စက်စက်အမျိုးအစားများနှင့်စျေးနှုန်း
ယခုနှစ် Huawei အတွက်လောင်းကြေးပေးသည့် input terminal ဖြစ်သော Huawei Y5 ကိုစပိန်တွင်ယူရို ၁၁၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
LG V40 တွင်ကင်မရာငါးလုံးပါရှိသည်
LG V40 သည်ကင်မရာငါးလုံးနှင့်အတူလာမည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟုကတိပြုထားသည့် LG မှ high-end အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy Note9ကိုသြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ပြသထားသည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် Galaxy Note9ကိုတင်ဆက်မည့်ပွဲအတွက်စာနယ်ဇင်းများသို့ဖိတ်ကြားမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်
Samsung က Galaxy Note9အတွက်ဖြန့်ချိမထားသောရက်ကိုတရားဝင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
အမှန်မှာ၊ ယခုရက်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ပုံစံအသစ်အတွက်“ Unpacked” ဖြစ်ရပ်နှင့်နီးစပ်မှုသည်ကောလဟာလများထွက်နေသည်။
ဂူဂဲလ်၏ Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြန်ပေါ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Pixel နှင့် Pixel XL တို့၏တတိယမြောက်မော်ဒယ်အချို့ကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်နီးကပ်သည်။
iOS 12 ကို iPhone (သို့) အိုင်ပက်ဒ်တွင်မည်သို့ install လုပ်ရမည်နည်း
ပထမဆုံး iOS 12 developer beta ကိုစတင်ပြီးသုံးပတ်အကြာတွင်အက်ပဲလ်သည်ပထမဆုံး iOS 12 beta ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်ပေးလိုက်သည်။
Huawei P20 Pro ကို European Hardware Association မှ "၂၀၁၈ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း" ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်
ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် European Hardware Association မှပေးသောချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Instagram သည် YouTube နှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိုသည်။ ပြီးတော့ IGTV လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒေါင်လိုက်ဗွီဒီယိုပလက်ဖောင်းအသစ်နဲ့လည်းအဲဒီလိုလုပ်မှာပါ။ Instagram အတူတူပဲ
Samsung Galaxy Note9model အသစ်ကိုတရားဝင်ကြည့်ရှုရန်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိတော့သည်။
Huawei Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့သည်မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းကိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်
OPPO Find X, စပိန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်သော "စမတ်ဖုန်း" ဖြစ်လိမ့်မည်
OPPO Find X သည်စပိန်နိုင်ငံရှိအမှတ်တံဆိပ်ကိုမြေယာပြုလုပ်မည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်လား။ သင့်ရှေ့ကင်မရာ
Google Pixel3XL ၏ဒီဇိုင်းသည်အမှုပြုလုပ်သူမှကျေးဇူးတင်သည်
LG X5 သည်ဘက်ထရီကြီးမား။ ၀ င်ရောက်မှုအကွာအဝေးအသစ်၏အဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်သည်
LG X5 သည်ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် ၂ ရက်အထိထားသင့်သည့်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အဆင့်ရှိစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးထွက်သတင်းများအရ Samsung သည်9GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် Galaxy Note 512 ကိုအထူးထုတ်ဝေရောင်းချဖွယ်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
OxygenOS 5.1.6 ဟာ OnePlus6ပြိုကွဲမှုကြောင့်ဆုတ်ခွာသွားသည်
system update များနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် OnePlus ဖြစ်သည်။ The …
Samsung Galaxy Note9နှင့် Gear S4 ကိုသြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်မိတ်ဆက်မည်
နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာမည့်သတင်းများအရ Galaxy Note9သည်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် Gear S4 နှင့်အတူလာမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
၎င်းသည် Samsung Galaxy Note9၏အရောင်များဖြစ်သည်
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏မော်ဒယ်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောကောလာဟလများနှင့်ပေါက်ကြားမှုများကိုတွေ့မြင်နေရသည်။
Xiaomi Redmi S2 သည်စပိန်သို့ရောက်ရှိလာပြီး selfies အတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖြစ်သည်
Xiaomi သည်၎င်း၏ကြေငြာချက်များနှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်ကစပိန်တွင် Xiomi Redmi S2 ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မရှိရင်…
LG Q Stylus သည် LG ၏ Galaxy Note နှင့်အစားထိုးသည်
ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည့် အချိန်မှစ၍ Samsung Galaxy Note သည်ဈေးကွက်အတွက်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းအခမဲ့လား။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည်အခမဲ့လား၊ အော်ပရေတာနှင့်ဆက်စပ်နေလားဆိုတာကိုမြန်မြန်သိအောင်သင်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်အခြားအော်ပရေတာများနှင့်၎င်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုရောင်းရန်ရည်ရွယ်ထားလျှင်၎င်းသည်ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်ဖြစ်သည်။
developer များကသူတို့၏ application များကို iOS version အသစ်နှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန် iOS 12 ၏ပထမဆုံး beta ကိုယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းများ၌မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုသင့်အားပြသပါမည်။
နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးသည် Qualcomm ၏ Snapdragon 700 မှစီမံခန့်ခွဲထားသော terminal နှင့်အတူ၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားစျေးကွက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်စျေးသိပ်မကြီးသည့် Pixel ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
Galaxy A9 Star - Samsung က iPhone X ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကူးယူပြီးပြီလား။
Samsung Galaxy A9 Star အသစ်၏ဒီဇိုင်းကိုစစ်ထုတ်ပြီး iPhone X ၏ဒီဇိုင်းကြောင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသောကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android Oreo သည် LG G6 သို့ရောက်ရှိသည်
တစ်နေ့ကျတော့ Nokia ရဲ့ကြေငြာချက်ဒါမှမဟုတ် HMD Global အကြောင်း၊ Android အတွက်မွမ်းမံမှုများအကြောင်း ...
Xiaomi Mi 8 သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဤမိသားစုတွင်မူ Xiaomi Mi 8 SE နှင့် Xiaomi Mi 8 Explorer Edition မူရင်းဗားရှင်းအပြင်ထပ်မံတွေ့ရှိရသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပေးသည်။
WhatsApp က iPhone ကို iOS 11.4 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်မက်ဆေ့ခ်ျများပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုပြသသည်
iPhone အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် iOS 11.4 update က WhatsApp နှင့် WhatsApp အသိပေးချက်များနှင့်ပwithိပက္ခဖြစ်စေပြီးပေးပို့သူနှင့်အကြောင်းအရာရော၊ ပေးပို့သူကိုပါပြသမှာမဟုတ်ဘူး။
Xiaomi Mi 8: Notch၊ Face ID၊ အတုဥာဏ်ရည်နှင့်ကွဲပြားသောဗားရှင်းသုံးမျိုးရှိသည်
Xiaomi က Xiaomi Mi 8 ကိုသူ့ရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ တက်ရောက်လာသူအားလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ကြပေမယ့်ရရှိနိုင်မယ့်ဗားရှင်းသုံးမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ မူရင်းမော်ဒယ်ကို Xiaomi Mi 8 SE နှင့် Xiaomi Mi 8 Explorer Edition တို့ပါ ၀ င်သည်
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ HTC သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်ကိုစပိန်၊ HTC Desire 2018+ တွင်ယူရို ၂၄၉ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
Motorola Moto Z3 Play renderers သည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Motorola Moto z3 Play အသစ်၏ပြန်ဆိုချက်များသည်၎င်းကိုရောက်ရှိပြီးနောက် ...
Xiaomi Mi 8, အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမဖြန့်ချိမီကဖော်ပြသည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် Xiaomi Mi 31 အသစ်၊ အာရှကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်အထင်ကရကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ အချက်အလက်အသစ်များပေါက်ကြားနေပြီ။ 2018D မျက်နှာစကင်နာနှင့်ကိုယ်ပိုင် Animojis
Lenovo သည်၎င်း၏ဆန်းသစ်သော Lenovo Z5 ကိုဇွန် ၅ ရက်တွင်တင်ပြမည်
Vivo Y83: « Notch »၊ MediaTek Helio P22 နှင့်နှင့် 200 euros အတွက်
Vivo Y83 သည် Android အခြေခံစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး MediaTek Helio P12 22 nm ပရိုဆက်ဆာကိုပထမဆုံးပေါင်းစပ်သည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။
Andy Rubin သည် Essential သည်ရောင်းရန်ဖြစ်သည်ဟုငြင်းဆိုသော်လည်းသူသည်မိမိအနာဂတ်ကိုမသိခဲ့ပါ
Bloomberg ၏အဆိုအရ Google မှဟောင်းနှင့် Essential ကိုတည်ထောင်သူ Andy Rubin ကနံပါတ်များအပြီးတွင်ကုမ္ပဏီကိုရောင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တည်ထောင်သူသည်သူ၏ ၀ န်ထမ်းများ၏စိတ်ဓာတ်ကိုငြိမ်းအေးစေသည်
Samsung Galaxy J8 သည် ၆ လက်မရှိပြီးနောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးပါသောလက်ကိုင်ဖုန်း
Samsung Galaxy J8 သည်အာရှကုမ္ပဏီကြီးမှမိုဘိုင်းဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လတွင်အိန္ဒိယ၌ရောင်းချသည်။ ၎င်းတွင် ၆ လက်မဖန်သားပြင်နှင့်၎င်း၏အဓိကကင်မရာတွင်နှစ်ဆမှန်ဘီလူးရှိသည်
ဥရောပ၌အလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်သွားပြီ ဖြစ်၍ Instapaper အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ
Instapaper ပြီးနောက်ဖတ်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်သင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤဆောင်းပါး၌ခိုင်လုံသောအခြားနည်းလမ်းများထက်သင့်ကိုဆက်တိုက်ဖော်ပြသည်။
LG Q7 ကိုဇွန်လတွင်စပိန်သို့ယူရို ၃၄၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်
LG Q7 ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအလယ်အလတ်တန်းစား terminal အသစ်၏ရက်စွဲနှင့်စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။
WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲ
WhatsApp ကိုသင့်မိုဘိုင်း၏ SD သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။ WhatsApp ကိုသင်၏မိုဘိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်နေရာယူပြီးပြင်ပကဒ်ကိုအစားထိုးခြင်းမှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါမည်။
Device အသစ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် HTC သည်အမြဲတမ်းတက်ကြွသောဈေးကွက်၏မျက်နှာတွင်ရှုံးနိမ့်နေပုံရသော်လည်း ...
HMD Global သည် ဆက်လက်၍ ကြီးထွားရန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ထပ်မံစုဆောင်းသည်
လက်ရှိ Nokia Phones ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် HMD Global မှ ...
ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်သည့်သူများ၏အကောင့်များကို Instagram မှရပ်တန့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
သင်၏တွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Instagram၊ YouTube သို့မဟုတ်အခြားအကောင့်များမှတစ်ဆင့်သင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဒီနှစ်အတွက် Alcatel 3, 3C, 3L, 3V, 3X အမျိုးအစားအသစ်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
မျက်နှာပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့် Xiaomi ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး terminal မှာ Xiaomi Mi 8 ဖြစ်ပြီး၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့၏အလင်းရောင်ကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်။
Application ကိုမည်မျှကြာကြာအသုံးပြုမည်ကို Instagram ကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိမ့်မည်
စမတ်ဖုန်းမှ application ကိုမည်မျှကြာကြာအသုံးပြုမည်ကို Instagram ကသိစေမည့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကို Instagram ကစမ်းသပ်နေသည်။
HTC U12 + ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီနှစ်ရက်အလိုတွင် Android ထုတ်လုပ်သူများအကြားပုံမှန်အားဖြင့်ဤ terminal ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
Epic Games မှ၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အရယခုအချိန်တွင် Android အတွက် Fortnite ကိုစတင်လအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။
OnePlus6သည်အစွန်းရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု
လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး၏ခုခံကာကွယ်မှုစမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုခြင်းရပ်တန့်သည်မှာကြာပြီ။
Xiaomi သည်စပိန်သို့ Xiaomi Redmi Note5နှင့် Mi MIX 2S ရောက်ရှိလာခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
Xiaomi တွင်အရေးကြီးသောမော်ဒယ်နှစ်မျိုးကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ Xiaomi Redmi Note5နှင့် Xiaomi တို့ဖြစ်သည်။
iOS သို့မဟုတ် Android အတွက် WhatsApp တွင်ဆက်သွယ်ရန်မည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ လူတစ်ယောက်ကမင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးပြီးမင်းတို့သူတို့ကိုနှုတ်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့သင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်နာပါ။ သင်သည် WhatsApp တွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိ / မရှိသိလိုပါသလား။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အကြံပေးချက်များနှင့်အတူထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် Samsung Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 ထုတ်ကုန်များတွင်အရောင်သစ်နှစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Huawei ၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ဆဲဖြစ်သော Honor ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မျက်နှာပြင် All-screen ပါသည့်နောက် Lenovo စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Lenovo သည်၎င်း၏သမ္မတမှတစ်ဆင့်စျေးကွက်အတွင်းပထမဆုံးမျက်နှာပြင်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့်မျက်နှာပြင်အချိုးအစား ၈၅% ဖြင့်ပြန်လည်ပြသထားသည်။
OnePlus 6T တင်ဆက်မှုမတိုင်မီနှစ်ရက်အလိုတွင်၊ ဂျာမန်အမေဇုံသည် terminal ၏စျေးနှုန်းနှင့် terminal ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်များနှင့်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမည်သည့်အရာကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်း Xiaomi မှဥရောပတွင်ရောင်းချသောစမတ်ဖုန်း ၂.၄ သန်း
Xiaomi သည်တိုက်ကြီးဟောင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြသခဲ့သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
Valve ကရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင်မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့် platform နှင့်ပတ်သက်သည့်ခေါင်းစဉ်များကိုဖွင့်ရန် iPhone နှင့် Android အတွက်အခမဲ့ app တစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
အဓိကသတင်းများ Android P Beta 2
Google I / O အခမ်းအနား၊ ဂူးဂဲလ်တီထွင်သူများအတွက်ကွန်ဖရင့်၊ Mountain View မှယောက်ျားများသည် ...
Wiko View2: ၆ လက်မ၊ ၁၉: ၉ format နဲ့ယူရို ၁၉၉ ပဲရတယ်
အကယ်၍ သင်သည်မကြာမီသင်၏ terminal ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်လုပ်ရန်စီစဉ်နေပါကအရည်အသွေးကောင်းသောစျေးနှုန်းအချိုးအစားရှိသော Wiko terminal အသစ်ဖြစ်သော View2 အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
Android ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသော malware သစ်ကို ZookPark ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလေသမျှအပေါ်သူလျှိုလုပ်သည်
အန္တရာယ်ရှိသော ZooPark malware အသစ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနိုင်ငံများအကြားထောက်လှမ်းရေးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဤမူပိုင်ခွင့်ကမျှော်လင့်ထားသည့် Samsung Galaxy X မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြသည်
မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်ပုံရိပ်အသစ်များအကြောင်းပြောဆိုမည့်နေရာသည်ကျွန်တော်တို့အားခွင့်ပြုပေးသော Samsung Galaxy X သည်အလွန်ဝေးလံသောအနာဂတ်တွင်မည်သည့်အရာရှိနေသည်ကိုမြင်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။
မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီက HTC U23 သို့မဟုတ် U12 + ဟုအမည်တပ်ထားသော၎င်း၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ချက်ကိုနောက်ဆုံးတွင်တရားဝင်တင်ဆက်လိမ့်မည်။
iPhone X သည်ပထမသုံးလပတ်တွင်အရောင်းရဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ပထမသုံးလတွင် Apple ၏ရောင်းအားနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Wiko Jerry3သည် Android Oreo နှင့်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၁၀၀ အောက်ဖြစ်သည်
ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Wiko သည် ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းဖြစ်သော Wiko Jerry3ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းကင်မရာများဖြစ်သော Huawei P20, iPhone X နှင့် Samsung Galaxy S9 +
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းလောကတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို Apple နှင့် Samsung တို့အမြဲတမ်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
Huawei သည်၎င်း၏ 2018 Y Series အသစ် - စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောလက်ကိုင်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်
LG G7 ThinQ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏အဆုံးမဟုတ်သောအပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်အလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည်။ Artificial Intelligence နှင့်ပရီမီယံအသံတို့ကိုအကြီးအကျယ်လောင်းခြင်း
အာရှကုမ္ပဏီ Huawei သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် operating system ကို Android အတွက်အစားထိုးအဖြစ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ အကယ်၍ နောက်ဆုံးတွင်အမေရိကန်အစိုးရကအီရန်အားအမေရိကန်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်အတွက်၎င်းကိုပိတ်ပင်ထားပါက။
Tencent သည် PUBG ၏တီထွင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဟက်ကာများအနေဖြင့်သူတို့၏အရိုးများကိုထောင်ထဲတွင်တွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပြုလုပ်သော cheats များကိုရောင်းချရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်နေသည်။
Nokia X ကိုမေလ ၁၆ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Nokia X ကိုမေလ ၁၆ ရက်တွင်တရားဝင်မိတ်ဆက်မည် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိလာမည့် notch ကိုအသုံးပြုရန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Telegram messaging platform သည် DDoS တိုက်ခိုက်မှု၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၄ င်း၏အချို့သောဆာဗာများသည်အပူလွန်ကဲစေသည်။
Opera Touch, လက်တစ်ဖက်ဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သောမိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ
Opera Touch သည်ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာအသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအရာအားလုံးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည် Android အတွက်သာဖြစ်သည်
Huawei P20 နှင့် Huawei P20 Lite Pink တို့ကို El Corte Inglésတွင်သာသီးသန့်ထားရှိသည်
El Corte Inglésနှင့် Huawei တို့သည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားလုံးကိုပန်းရောင်ဖြင့် Huawei P20 Lite နှင့် Huawei P20 နှစ်ခုလုံးကိုသီးသန့်ကမ်းလှမ်းရန်ပူးပေါင်းသည်
Google သည် bandwagon အားအချို့သော emoticons များကိုပြုပြင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရေပစ္စတိုတစ်လုံးပါ ၀ င်သည့်ရေလှောင်ကန်အတွက်ပစ္စတို emoticon ကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။
iPhone က iOS 12 သို့မွမ်းမံပါလိမ့်မယ်
လာမည့် iOS 12 update သည် iPhone 5s နှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်မှာလအနည်းငယ်အတွင်းစျေးကွက်ထဲရောက်လိမ့်မည်။
ဘာစီလိုနာတွင်နောက်ဆုံး MWC တွင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် Samsung Galaxy S9 နှင့် Galaxy အသစ်အတွက် AR Emoji ကိုစတင်ခဲ့သည်။
eBay application သည်ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းချင်သောထုတ်ကုန်များ၏ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ရန်နှင့်ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်ကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်စွက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
eBay Super Weekend သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံး၏အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့စျေးဖြင့်ပြန်လည်ပြသခြင်းဖြစ်သည်
Sony Xperia XZ2 Premium နှစ်ဆကင်မရာသည်ဂျပန်မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ရောက်ရှိသည်
Sony Xperia XZ2 Premium သည်ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်ကင်မရာတွင် dual sensor ပါရှိသည်။ Snapdragon 845 chip နှင့် 4K display တို့ပါဝင်သည်
ရွှေရောင် iPhone ၏စီစစ်ထားသောပုံများ
ရွှေ iPhone X ကိုပေါက်ကြားခဲ့ပြီး FCC အသိအမှတ်ပြု ပထမဆုံးသောပုံရိပ်များနှင့်အမှန်တကယ်ရှိပြီးသားဖြစ်သော Apple ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျနော်တို့ WTF ကြိုးစားခဲ့သလား! Smart Stickers များ၊ အသုံးဝင်သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့အထောက်အပံ့
WFT?! Smart Sticker၊ ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံး selfies တွေကိုယူပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းကိုနာရီနဲ့ဗီဒီယိုနာရီပေါင်းများစွာသုံးစွဲနိုင်စေဖို့ပါးလွှာပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့နောက်ခံအထောက်အပံ့အကြောင်းပြောနေတာပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် Firefox update သည်ပုံမှန်အားဖြင့် tracking ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့် web page များမှခြေရာခံကိရိယာများမှကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
LG V35 ဒေတာပေါ်လာပြီး LG G7 ကိုတရားဝင်တရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ
LG အနေဖြင့်လာမည့်မေလ ၂ ရက်အတွက် New York City တွင်၎င်း၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်သည်။
Fortnite နှင့်လိုက်ဖက်သော Android စက်များ
မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက်၊ ဒီနှစ်ဖြစ်ခဲ့တာ ၄ လအတွင်းမှာဗျာဒိတ်ဂိမ်းတစ်ခုထဲက Fortnite ပဲ။
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ Honor 7C နှင့် 7A အသစ်တွေကိုစပိန်နိုင်ငံမှာပြသခဲ့ပါတယ်။
ZTE Iceberg ၏ဒီဇိုင်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ချက်ပြသသည်။ နှစ်ထပ်ထုပေါ်တွင်လောင်းခြင်းအားဖြင့်အံ့အားသင့်စေသည့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။